လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - China Blackout Factory
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော Fashion Roller Blinds Zebra Fabric 100% Polyester
သက်တန့်မျက်လုံးများ၊ မှေးမှိန်သောမျက်မမြင်များ၊ နှစ်လွှာအလွှာရှိ roller blinds, နေ့နှင့်ညဘက်မျက်မမြင်များစသည့်လူသိများသည့် Zebra blinds များကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှစတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်။
၎င်းသည်သုံးဖက်မြင်ခံစားမှုရှိပြီးအလွန်ပူနွေးသည်။ ၎င်းသည်အထည်အမျိုးအစားနှင့်အထည်များ၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ရုံသာမကဘဲ venetian blinds, roller blinds နှင့်ရောမ blinds များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုအိမ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဗီလာများ၊ နေရာများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှပပြီးအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော zebra ထည်ထုတ်လုပ်ရန် ၁၆ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသည်။
ဖက်ရှင်ပုံစံအသစ် Zebra Window Roller မျက်မမြင်ထည် 3m အကျယ်
မြင်းကျား Window Roller မျက်မမြင်အထည်
Zebra window roller blinds, zebra blinds, dimming blinds, double-layer roller blinds, day and night blinds စသည်ဖြင့်လူသိများသောတောင်ကိုရီးယားတွင်စတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်။
zebra window roller blinds ထည်၏အကျယ်မှာ ၃ မီတာဖြစ်ပြီး၊ ပစ္စည်းမှာ ၁၀၀% polyester ဖြစ်သည်။ Groupeve zebra blinds ထည်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်သန့်ရှင်းရေးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် -
၁။ Ultrasonic သန့်ရှင်းရေးသည်ထည်ကိုအသစ်ကဲ့သို့တောက်ပစေသည်။
3. ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားခြင်း / ပိုးသတ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့်အထည်ကုလားကာမှ ၁၀ စင်တီမီတာအကွာအဝေးတွင်လေမှုတ်ရန်ရေနွေးငွေ့သံဖြင့်သုံးပါ။
4. သန့်ရှင်းရေးရှင်းလင်းခြင်းသည်နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေးကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်၊ ပြတင်းပေါက်အလှဆင်ခြင်းမှဖုန်မှုန့်များကိုဖယ်ရှားရန်သင်သည်ဆံပင်အခြောက်ခံစက် (အပူပေးရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိ) ကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
: Double L။ မျက်မမြင်အထည်
သက်တန့်မျက်လုံးများ၊ သက်တန့်မျက်စိကန်းသူများ၊ သက်တန့်မျက်လုံးများ၊ နေ့နှင့်ညညဘက်မျက်လုံးများ၊ သက်သက်သာမျက်စိကန်းသူများစသည်တို့ကိုလည်းလူသိများသည်။ တောင်ကိုရီးယားတွင်စတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်။ နှစ်လွှာအလွှာမျက်စိကန်းထည်၏ပစ္စည်း 100% polyester ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ထပ်အလွှာသည်အလင်းကိုနေရာမယူဘဲထိန်းညှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အထည်နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ရုံသာမကဘဲ venetian blinds, roller blinds နှင့်ရော blinds များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုအိမ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဗီလာများ၊ အဆင့်မြင့်ရုံးအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားနေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
Sun Shades ချိန်ညှိ Zebra အထည်အလိပ်မီးပျက်ခြင်း
သက်တန့်မျက်လုံးများ၊ မှေးမှိန်သောမျက်မမြင်များ၊ နှစ်လွှာအလွှာရှိ roller blinds, နေ့နှင့်ညဘက်မျက်မမြင်များစသည့်လူသိများသည့် Zebra blinds များကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှစတင်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်။ zebra ထည်၏ပစ္စည်းသည် 100% polyester ဖြစ်သည်။
အဆိုပါမြင်းကျားထည်အာကာသသိမ်းပိုက်ခြင်းမရှိဘဲအလင်းချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အထည်နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း၏အားသာချက်များကိုပေါင်းစပ်ရုံသာမကဘဲ venetian blinds, roller blinds နှင့်ရော blinds များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းပေါင်းစပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုအိမ်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဗီလာများ၊ အဆင့်မြင့်ရုံးအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားနေရာများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် privacy ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်အလင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။